Barcelona oo dib u dhac kala kulantay wadahadaladii qandaraaska ee Dembele iyo Fati | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Barcelona oo dib u dhac kala kulantay wadahadaladii qandaraaska ee Dembele iyo...
Barcelona oo dib u dhac kala kulantay wadahadaladii qandaraaska ee Dembele iyo Fati
Barcelona ayaa ku adkaatay inay heshiisyo cusub la gasho dhowr ciyaartoy oo muhiim ah, sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay.
Kooxda ayaa bilihii ugu dambeeyay la daalaa dhacaysay dhaqaale xumo, taas oo ka dhigaysa booskooda mid adag wada xaajoodyada qandaraasyada ay kula jiraan ciyaartooyda uu heshiiskoodu dhacayo xagaaga dambe.
Sergi Roberto , Ansu Fati iyo Ousmane Dembele ayaa ka mid ah seddexdaas ciyaartoy, iyadoo Barca ay aad u dooneyso inay ku sii heyso Camp Nou wixii ka dambeeya xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Marca , wadahadalada qandaraaska ayaa hakad galay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, taasoo la micno ah in kooxda ay halis ugu jirto inay seddexdaas ciyaaryahan ku lumiso wax aan jirin.
Bishii la soo dhaafay, madaxweyne Joan Laporta ayaa yiri “cusboonaysiinta Sergi Roberto waa la isku raacay waxa kaliya ee ka dhimanna waa saxiixa”, laakiin wax war ah oo ka soo baxay ma jirin.
Dhanka kale, Fati ayaa loo arkaa isha ugu weyn ee Barcelona ee mustaqbalka, laakiin wakiilkiisa Jorge Mendes ayaa hiigsan doona inuu ka gorgortamo heshiiska ugu wanaagsan ee macmiilkiisa maadaama uu ogyahay sida da ‘yarku ugu qiimo badan yahay kooxda.
Xiddiga garabka ka ciyaara Dembele ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Manchester United wuxuuna xor u ahaan doonaa inuu la hadlo Red Devils bisha Janaayo haddii aan heshiis cusub lala gaarin Barca.
Previous articleMidowga Musharaxiinta oo dalab xasaasi ah u diray xukuumadda Somaliland
Next articleMaxaa ka jira in militariga ISRAEL ay tageen Azerbaijan oo ay is-hayaan dalka IRAN?